Qaybaha dhirta: sharraxaadda iyo sifooyinka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Dadka badankiisu waxay garan karaan kan ugu weyn Qaybaha geedka maadaama ay jiraan electrons leh geed tiirar ah oo ku yaal geed kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtagal ah in mid kasta oo ka mid ah dhammaan qaybaha dhirta ee la taaban karo iyo si faahfaahsan.
Sidaa darteed, waxaan dooneynaa inaan u hurno maqaalkan si aan kuugu sheegno qaybaha ugu muhiimsan ee dhirta si faahfaahsan iyo waxa ay yihiin shaqooyinka mid kasta oo iyaga ka mid ah.
1 Qeybaha dhirta
Haddii aan soo koobno ​​qaybaha ugu muhiimsan geedka, waxaan dhihi karnaa waa kuwan soo socda:
Tani waxay u janjeertaa inay kala soocdo ku dhawaad ​​qof kasta. Si kastaba ha ahaatee, sifooyinka mid kasta oo ka mid ah qaybaha dhirta si weyn looma yaqaan si faahfaahsan sida hab guud. Waxaan mid mid u qori doonaa waxa ay yihiin qaybaha geedka.
Jirridu waa qaybta hawada ee geedka, waxaana shaqadeeda ka mid ah in ay u fidiso taageero iyo qaab dhismeed, iyada oo taageerta xubnaha kale ee dhirta ee ka sarreeya dhulka, sida caleemaha iyo ubaxa. Muuqaalkeeda kale ee ugu muhiimsan waa taas waxay muujisaa geotropism taban, taas oo macnaheedu yahay in ay u koraan jihada ka soo horjeeda ee culeyska. Inkasta oo aan soo sheegnay in ay tahay qaybta hawada ee geedka, runtu waxay tahay in ay jiraan dhowr nooc oo afkoda ah iyo shaqooyinkooda:
Jirridu waxaa loo kala saari karaa siyaabo kala duwan, laakiin inta badan waxaa loo kala saaraa iyadoo lagu salaynayo deegaanka laga helo, sidaas darteed waxaa lagu kala saarayaa jirridda dhulka hoostiisa iyo hawada hawada.
Dhulka hoostiisa afkoda Waxay u kala qaybsan yihiin digriiga, rhizomes iyo nalalka.
Cirridka anteenada Waxa loo qaybin karaa afkoda toosan, stolons, fuushan afkoda iyo laamo qalloocan, laakiin waxa kale oo jira afkolo gaar ah sida jeexan, stoloniferous ama jilicsan.
Sida aan sheegnay, mid ka mid ah labada shaqo ee ugu muhiimsan ee jirida waa in la taageero dhammaan qaybta hawada ee geedka. Midda kale waa gaadiidka nafaqooyinka iyo walxaha iyada oo loo marayo gudaha gudaha geedka. Laga soo bilaabo xididdada, waxa loogu yeero dheecaan cayriin waxay kor u kacdaa tuubada asliga ah ilaa caleemaha, halkaas oo ay ku hodmaan kaarboon dioxide oo ay soo saarto dheecaan fiican, taas oo ah cuntada geedka.
Xididdada si fudud ayaa looga garan karaa dhirta intooda badan. Se waxa ay wax ka qabtaa qaybta laanta ee inta badan laga helo dhulka hoostiisa. Waxay u adeegtaa inay ku quudiso geedka nafaqooyinka ciidda. Waa xubinta ugu horraysa ee ay dhirtu samaysato marka ay soo baxdo. Waxa la odhan karaa xididku waa qaybta ugu muhiimsan geedka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo xidid ah waxaana loo kala saari karaa si kala duwan iyadoo ku xiran barroosinka uu geedku bixiyo, qaabka iyo jihada koritaanka.
Xididdadu waxay leeyihiin shaqo aad muhiim u ah geedka. Aynu aragno waxa ugu muhiimsan ee xididdada:
Sida aynu sheegnay, mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee xididdada waa in la nuugo biyaha iyo nafaqooyinka iyada oo loo marayo timaha nuugaya ee yaryar ee ay leeyihiin, si ay markaas cuntadu u dhex mariyaan jirridda geedka intiisa kale.
Shaqo kale oo ay fuliyaan waa in lagu xidho dhammaan qaab dhismeedka geedka dhexda, ama xididada dhulka hoostiisa oo si qoto dheer loo qabsaday, ama xididada anteenada oo ku dheggan dhirta kale ama sagxadaha kale.
Xididdada qaar ayaa leh awoodda photosynthesize ama waxay ku dhegaan dhirta kale si ay u nuugaan nafaqooyinkooda.
Caleemaha waa mid ka mid ah qaybaha ugu caansan ee dhirta kasta, waxay ku jiraan ku dhawaad ​​dhammaan dhirta inkastoo ay kala duwan yihiin qaababka, cabbirka iyo xitaa midabada, marka lagu daro, caleemaha dhirtu waxay leeyihiin hawlo muhiim ah sida photosynthesis iwm.
Waa xubnaha dhirta, guud ahaan midabkoodu aad u dhuuban yahay iyo cagaar, kuwaas oo ka soo baxa caleemaha ama lafaha dhirta. Waxaa loo kala saari karaa siyaabo badan oo kala duwan: marka loo eego petioles, margins, feeraha iyo xitaa qaabka. Dhanka kale, kala saariddeeda aasaasiga ah waxay ku salaysan tahay in geedku xajisto caleentiisa sanadka oo dhan oo ay yihiin kuwo daa'im ah, ama haddii ay waayaan bilaha qabow oo ay yihiin kuwo geedo ah.
Caleemuhu waxay inta badan fuliyaan saddex hawlood:
Waxay sawiraan si ay tamarta kiimikada uga helaan fallaadhaha qorraxda.
Waxay u ogolaadaan dhirta inay neefsadaan oo ay gaas beddelaan inta lagu jiro habeenkii.
Way dhididsan yihiin, taasoo u oggolaanaysa in biyo xad-dhaaf ah ay dhex maraan.
Marka laga hadlayo dhir badan, ubaxu waa qaybta ugu soo jiidashada badan dadka, isaga ayaana mas’uul ka ah taranka geedka. Ubaxyadu inta badan waa kuwo aad u dhalaalaya sababtan: si ay u soo jiitaan cayayaanka pollinating. Laakiin si kastaba ha ahaatee, Dhammaan dhirta waxay ku tarmaan ubaxyo.
Waxaa jira noocyo badan oo ubax ah oo ku kala duwan cabbirka, midabka, qaabka iyo udgoonka. Ubaxyadu waxay leeyihiin calyx, corolla, stamens, fiilooyinka, iyo pistils. Manka waxa uu ku jiraa stamens (xubnaha lab iyo dheddig ee dhirta), habka soo saarista dhirta cusubna waxa ay dhacdaa marka manka loo qaado pistils xubnaha dhediga.
Dhirta oo dhami midho ma dhalaan, laakiin kuwa galmoodka ku dhasha abuur waxay u janjeeraan inay midho dhalaan. Ubaxa marka la bacrimiyo, waxa uu soo saaraa iniin ka samaysma miraha hareerihiisa. Sida caleemaha iyo ubaxa, waxaa jira noocyo badan oo miro ama khudaar ah. Midho kasta oo aad sida caadiga ah u cunto waa midhaha geedka ama geedka, laakiin sidoo kale midhaha aan cunno sida lawska oo kale.
Shaqada midhaha ayaa inta badan ah inay ilaaliso abuurka iyadoo la fududeynayo kala firdhinteeda iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa xayawaanka, kaas oo cuna midhaha oo ku kaydiya iniinaha meelo kale, sidaas darteed fududaynta taranka noocyada.
Abuurku wuxuu muhiim u yahay dhirta tan iyo iyaga ayay ku waari karaan hidde-sideyaasha. Waxaa jira noocyo badan: baalal leh, ka yar madaxa biinanka, cabirka kubbadda tennis-ka ... Si aad u soo baxdo, waxaa muhiim ah in xaaladaha ay ku habboon yihiin nooc kasta. Sidaa darteed, haddii, tusaale ahaan, ay ka timaaddo deegaan ay xilliga qaboobaha aad u qabow tahay, si ay u soo baxaan, heerkulku wuxuu u baahan doonaa inuu hooseeyo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto qaybaha geedka leh sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Qeybaha dhirta